Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray DF Soomaaliya
Wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, iyo Somaliland, Yaasiin Faratoon.
HARGEYSA, Somaliland – Maamulka Somaliland ee fadhigiisu yahay magaaladda Hargeysa ayaa maanta oo Talaado ah wuxuu si kulul uga jawaabay hadal dhowaan kasoo yeeray Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Muqdisho oo u waramay Alaraby Tv, ayaa ku eedeeyay shirkadda DP World "khalkhalgelin iyo ku xadgudubka madax-banaanida Soomaaliya".
Cawad oo aan fahfaahin nooca "khalkhalgelin" ee uu ku eedeeyay shirkadan laga leeyahay Imaaraadka, ayaa xusay in ay ka shaqeynayaan sidii ay "uga difaaci lahaayeen midnimadda" wallow uusan sharaxin.
Balse, qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa hadafka hadalkaas ku sifeeyay "iska hor-keenka iyo khalkhalgelinta xiriirka Imaaraadka iyo Somaliland".
"Dawladda taagta daran ee Soomaaliya waxa ay dedaal badan ku bixisay in ay hor istaagto, isla markaana siyaasadayso mashaariicda maalgashi iyo horumarineed ee dawladda Imaaradka Carabtu ka waddo 'Jumhuuriyadda' Somaliland taas oo ah wax aan marnaba la aqbali karin," ayay raacisay.
Somaliland ayaa sanadkii 1991-dii ku dhawaaqdey in ay ka go'dey Soomaaliya inteeda kale, balse ma aysan helin aqoonsi caalami ah.
War-saxaafadeedka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay "in aannu daacad ka ahayn wadahadallo miro dhal noqda oo lagu kala baxo".
"Somaliland waxa ay si buuxda ugu wargalinaysaa dawladda Imaaraadka Carabta ee aannu walaalaha nahay, dawladdaha xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta iyo adduunka intiisa kaleba in madaxbannaanida Somaliland tahay mid aan ka laabasho lahayn isla markaana dadka reer Somaliland diyaar u yihiin ka midho dhalinta qaddiyaddooda ay xaqa u leeyihiin wax kasta oo ay ku kacayso iyo wakhti kasta oo ay qaadanayso," ayaa lagu soo xiray bayaanka.
Shirkadda DP World oo baarlamaanka uu ka mamnuucay in ay ka howlgasho gudaha waddanka ayaa mashaariicyo lagu horumarinayo kaabeyaasha dhaqalaaha siiba dekadaha ka fulisa qaybo kamid dalka sidda Somaliland.
Qodob ay tahay in laga saaro ajendaha wada hadalada DF iyo Somaliland
Soomaliya 21.07.2019. 08:53
Qodobkan oo safka hore uga jira ajandaha labada dhinac ayaa la rumeysan yahay in uu yahay midka is-jiidjiidka keenay.
UK oo soo saartey digniin la xiriirta nooca doorashada Soomaaliya
Soomaliya 20.08.2020. 19:45
Tarsan oo Muqdisho kusoo laabtey iyo Villa Somalia oo jawaab laga sugayo
Soomaliya 17.02.2019. 10:42
Soomaaliya oo qarka u saaran in lagala noqdo maamulka hawada
Soomaliya 07.01.2020. 08:00